Niala ara-bakiteny ny fiaramanidina vaovao Rolls-Royce All-Electric
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Niala ara-bakiteny ny fiaramanidina vaovao Rolls-Royce All-Electric
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Vaovao farany momba ny UK
Rolls-Royce fiaramanidina elektrika rehetra
Ilay tranonkala: Boscombe Down an'ny Ministeran'ny Fiarovana UK. Ny faharetan'ny sidina: 15 minitra. Ny fiaramanidina: fanahy mahery vaovaon'ny fanavaozana an'i Rolls-Royce. Ny vokany: dingana iray hafa ho an'ny dia an'habakabaka voarindra.
Rolls-Royce dia nanao andrana hafa tamin'ny firaketana an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny fiaramanidina elektrika rehetra.
Ity sidina voalohany ity dia manome ny orinasa fotoana ahafahana manangona angon-drakitra fampisehoana sarobidy amin'ny rafitra herinaratra sy ny herinaratra fiaramanidina.
Amin'ny fampandrosoana dia rafitra fampiroboroboana herinaratra tanteraka ho an'ny lampiharany, na izany ny fidirana an-tseranana sy ny fipetrahana (eVTOL) na ny fiaramanidina komuter.
Rolls-Royce dia nanambara androany ny fahavitan'ny sidina voalohany an'ny herinaratra rehetra Fanahin'ny fanavaozana fiaramanidina. Tamin'ny 14:56 (BST) ny fiaramanidina dia nankeny amin'ny habakabaka notarihan'ny herinaratra herinaratra 400kW (500 + hp) niaraka tamin'ny fonosana bateria matevina be indrindra naangona ho an'ny fiaramanidina iray. Ity dia dingana iray hafa mankany amin'ny fanandramana eran-tany an'ny fiaramanidina ary dingana iray hafa amin'ny dian'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny fanaparitahana.
Warren East, CEO an'ny Rolls Royce-, dia nilaza hoe: “Ny sidina voalohany an'ny Fanahin'ny fanavaozana dia zava-bita tsara ho an'ny ekipa ACCEL sy Rolls-Royce. Izahay dia mifantoka amin'ny famokarana ireo zava-bitan'ny teknolojia izay ilain'ny fiarahamonina hanaparitahana ny fitaterana manerana ny rivotra, ny tany ary ny ranomasina ary hanararaotra ny fotoana ara-toekarena amin'ny tetezamita mankany amin'ny zero aotra.
“Tsy ny famotehana ny firaketana an'izao tontolo izao fotsiny izany; ny haitao mandroso sy mandroso teknolojia novolavolaina ho an'ity programa ity dia manana fampiharana mahaliana ho an'ny tsena Urban Air Mobility ary afaka manampy amin'ny fanaovana ny 'jet zero' ho zava-misy. ”
Ny sekretera ao amin'ny orinasa UK Kwasi Kwarteng dia nilaza fa: "Ity zava-bita ity, sy ireo firaketana antenaina fa harahinay, dia mampiseho fa mbola eo an-tampon'ny laharam-pahamehana amin'ny fanavaozana ny aérospace i UK. Amin'ny alàlan'ny fanohanana ireo tetik'asa toa an'io dia manampy amin'ny fampivoarana ny sisin-tany ny governemanta, manosika ireo haitao izay hitrandraka ny fampiasam-bola sy hamaha ny fiaramanidina maitso madio kokoa ilaina hampitsaharana ny fandraisan'anjaranay amin'ny fiovan'ny toetrandro. "
Mandritra ity sidina voalohany ity, Rolls-Royce dia hanangona angon-drakitra fampisehoana sarobidy momba ny rafitra herinaratra sy ny rafitra fampiroboroboana ny fiaramanidina. Ny programa ACCEL, fohy ho an'ny "Accelerating the Electrification of Flight," dia misy ny mpiara-miasa YASA, ny mpanamboatra motera elektrika sy ny mpanara-maso ary ny electroflight fanombohana ny fiaramanidina. Ny ekipan'ny ACCEL dia nanohy nanavao hatrany raha mbola manaraka ny elanelam-bahoaka momba ny fiaraha-monina sy ny torolàlana momba ny fahasalamana hafa ny governemanta UK.
Ny antsasaky ny famatsiam-bola ataon'ny tetikasa dia nomen'ny Aerospace Technology Institute (ATI), iaraha-miasa amin'ny Departemantan'ny Business, Energy & Industrial Strategy ary ny Innovate UK.
Ny tale jeneralin'ny Aerospace Technology Institute, Gary Elliott, dia nilaza hoe: "Ny ATI dia famatsiam-bola tetikasa toy ny ACCEL hanampiana an'i UK hampivelatra fahaiza-manao vaovao sy hahazoana lohalaharana amin'ireo haitao izay hanimba ny sidina. Miarahaba antsika rehetra izay niasa tamin'ny tetikasa ACCEL mba hahatonga ny sidina voalohany ho zava-misy ary manantena ny andrana firaketana ny hafainganana haingana izay hisambotra ny eritreritry ny besinimaro amin'ny taona hampiantranoan'ny COP26 UK. Ny sidina voalohany an'ny Spirit of Innovation dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny teknolojia manavao manome vahaolana ny sasany amin'ireo fanamby lehibe indrindra manerantany. ”
Ny orinasa dia mamolavola ho an'ny mpanjifany rafitra fampiroboroboana herinaratra feno ho an'ny lampiharany, na izany dia fiainganana mitsangana elektrika ary ny fiaramanidina (eVTOL) na fiaramanidina mpandeha. Hampiasa ny teknolojia avy amin'ny tetikasa ACCEL ny orinasa ary hampihatra izany amin'ny vokatra ho an'ireo tsena vaovao ireo. Ireo toetra takian'ny "fiarakaretsaka fiaramanidina" amin'ny batterie dia mitovy amin'ny zavatra novolavolaina ho an'ny Fanahin'ny fanavaozana, ka hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny 300+ MPH (480+ KMH) - izay kendrena amin'ny andrana firaketana an'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, Rolls-Royce sy airframer Tecnam dia miasa miaraka amin'i Widerøe, seranam-piaramanidina isam-paritra ao Scandinavia, hanatitra fiaramanidina mpandeha elektrika rehetra ho an'ny tsenan'ny kaomisiona, izay kasaina ho vonona amin'ny serivisy fidiram-bola amin'ny 2026.
Rolls-Royce dia manolo-tena hiantoka ny vokatra vaovao ho mifanaraka amin'ny asan'ny aotra net hatramin'ny 2030 ary ny vokatra rehetra dia hifanaraka amin'ny net zero amin'ny 2050.